Ingxelo ye-invoice - I-Ocean-Components.com
Bathandekayo bonke abasebenzisi, uya kufumana i-invoice yethu esemthethweni emva kokuthenga kwi-Ocean-Components.com, nceda ufunde lo myalelo ungezantsi ngononophelo.
1, Ukufundiswa kwe-invoice ekhutshiweyo
I-invoice iya kukhutshwa kwi-Ocean-Components.com. Isixa se-invoice siya kuxhomekeka kwisixa esona sixa uhlawule ngaso.
I-Ocean-Components.com ibonelela ngeendlela ezimbini zee-invoice, i-invoice yeVAT (i-inondeductible) kunye ne-invoice ye-VAT ekhethekileyo (Deductible).
Ukuphucula ukusebenza kakuhle kunye nokuthintela ukusebenza, i-invoice iya kukhutshwa kwiintsuku ezi-5 zomsebenzi emva kokuba abasebenzisi befumene iimpahla.
Nceda ugcwalise idilesi echanekileyo, umntu onxibelelana naye, inombolo yomnxeba ukuqinisekisa ii-invoice zinokuziswa ngokuchanekileyo. Ukuba awugcwalisi olu lwazi, i-Ocean-Components.com iya kuthumela i-invoice kwidilesi enye kunye neempahla ezithunyelweyo, ukuze sikwazi ukunxibelelana nawe ngexesha.
I-2, i-ankle ye-VAT
I-Ocean-Components.com ihlala ikhupha i-invoice yeVAT yabasebenzisi abangabhatali rhafu ngokubanzi.
Nceda ubhale igama elifanelekileyo lenkampani kunye nolwazi lwerhafu ngaphakathi kwi-invoice.
I-3, i-invoyisi ye-VAT ekhethekileyo
Ukuba ufuna ukukhupha "i-invoyisi ye-VAT ekhethekileyo", nceda unxibelelane ne-accounting yethu, kungenjalo inkqubo ye-Ocean-Components.com iya kukhupha i-invoice yeVAT.
Nceda ugcwalise kwaye ujonge ngononophelo lonke ulwazi lwe-invoice, Ocean-Components.com ayizukuthatha xanduva ukuba kukho impazamo.
I-invoyisi ye-VAT ekhethekileyo iya kuthunyelwa nge-Express emva kokuqinisekisa ukuthunyelwa.
Nceda ugcwalise igama lenkampani, idilesi, inombolo yefowuni, inombolo yerhafu, igama lebhanki kunye neakhawunti, i-invoice ukuthumela idilesi, ukuze abasebenzisi basebenzise i-invoice ekhethekileyo ye-VAT, kodwa lonke ulwazi oluzeleyo kufuneka lilingane nentlawulo yerhafu.
Igama lenkampani kufuneka libe ligama lokubhaliswa kwamashishini kunye nezorhwebo.
Idilesi yeNkampani kunye nenombolo yefowuni ye-invoice kufuneka ifane nolwazi lwenkampani yakho.
Inombolo yobhaliso lwerhafu linani elikw << Isatifikethi sobhaliso lwerhafu >>, i-15 amanani aqhelekileyo, nceda ujonge ngononophelo kunye negalelo.
Igama lebhanki kunye nenombolo yeakhawunti mazibhalwe, zombini.
Ukuba abasebenzisi babhala ulwazi olungalunganga lwe-invoice ye-VAT, iOcean-Components.com iyakukhupha i-invoyisi yeVAT ngokuzenzekelayo, ngaphandle kokubuya.
I-Ocean-Components.com ayisamkeli isicelo sokuphinda singene kwi-invoice ye-VAT, ukuba sele sikhuphe i-invoice ngokolwazi lwabasebenzisi.
5, Isikhumbuzo sobuhlobo
Ukuba unamathandabuzo malunga ne-invoice ekhutshiweyo, nceda unxibelelane nesebe lezemali le-Ocean-Components.com.
Ukuba awuyifumani invoice kwiintsuku ezingama-30 emva kokufumana iimpahla, pls qhagamshela inkonzo yabathengi ye-Ocean-Components.com. Asiyi kukhupha i-invoice okwesibini ukuba awukwazi ukunxibelelana nathi ngeentsuku ezingama-90 (ukusukela kumhla woku-odola)
Igama lemveliso kwi-invoice iya kubhala ii-Elektroniki zoMatshini, Inxalenye yenxalenye iya kubhalwa njenge-oda yangempela, akukho nasinye isicelo esikhethekileyo.
I-6, i-invoice ukubuya
Nceda unxibelelane nenkonzo yethu yabathengi ukuba ufumanisa ukuba ulwazi lwe-invoice aluchanekanga ngokomyalelo, i-Ocean-Components.com iya kuthatha indawo kwaye ithumele iifayile ezichanekileyo.
Nceda unxibelelane nenkonzo yethu yabathengi ukuba ufuna ukutshintsha ulwazi lwe-invoice, siya kuthumela i-invoice ehlaziyiweyo kwidilesi yakho ebonisiweyo emva kokuba iSebe lethu lezemali liqinisekisile.
Ngaphandle kwemvume yenkonzo yabathengi, isebe lethu lezemali aliyi kwamkela isicelo sokubuyisela i-invoice kwakhona ngomnxeba, ifeksi, imeyile.